musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiPutukezi Vatambi Raphael Guerreiro Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane June 17, 2020
Yedu Raphael Guerreiro Biography Chokwadi inopa yakazara yakazara yeChinyorwa Chake Chemwana, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mukadzi, Vana, Hupenyu hwepamoyo uye Hupenyu Hwechokwadi. Zvichitaurwa zviri nyore, iko kuongororwa kwakakwana kweiyo Hupenyu Hupenyu, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazova Mukurumbira.
Raphael Guerreiro Biography Nyaya- Kubva paUdiki Hwake nguva kusvika pakuzivikanwa kwake. 📷: LeParisien naPicuki
Ehe, iwe neni tinoziva iye Mufambi Webhola, anonzi "BatteryAri pakati pe Akanaka Kwazvo Kuruboshwe muWorld Nhabvu. Nekudaro, tinoziva kuti pamwe hauna kuverenga yakakwana yeRaphael Guerreiro's Biography, iyo yatakagadzirira uye inoshamisa. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Raphael Guerreiro Nyaya Yechecheche:
Kune kutanga, mazita ake akazara ndiRaphaël Adelino José Guerreiro. Mutambi wePutukezi akaberekwa musi wechi22 waZvita 1993 kuna baba vake, (mushandi wefekitori), naamai vake, (mukadzi wepamba), muLe Blanc-Mesnil, imba inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweParis, France.
Kana wanga usingazive, Moussa Sissoko inogoverana nzvimbo imwechete yekuzvarwa nemutambi anoruboshwe-tsoka. Sekureva kweFrance media, Raphael Guerreiro akaberekerwa mumhuri yevashanu, iyo ine vabereki vake uye vatatu vatatu. Ndiye gotwe pahama dzake.
Nezita rake "Raphael," unobvumirana neni kuti Guerreiro akaberekerwa kumhuri yeChristian. Zvakare zita iri rinobva muchiHebheru, zvinoreva kuti "Mwari Anoporesa." Chekupedzisira asi chisiri chidiki, iro zvakare izita remumwe weNgirozi dzakanangana nekuporesa.
Raphael Guerreiro Mhuri Yemhuri:
Kutanga uye pamberi pekunze, kuruboshwe-kumashure, sekunge vamwe vake vePortugal Ricardo Pereira uye Diogo Jota, asina kuberekwa mumusha wakapfuma. Vabereki vaRaphaël Guerreiro vaive vasiri mhando vaisakwanisa kumubhadharira matoyi anodhura, haungafarire kumuwanira nhabvu.
Sezvakaratidzwa pakutanga, kuva nababa vari mushandi wefekitori naamai vari mukadzi wepamba zvinoreva kubva kumhuri yepakati yemhuri. Kare ikako, kudzikisa mutengo werenda, mhuri yaRaphael Guerreiro yaifanira kugara muLe Blanc-Mesnil, sub-urbs yeFrance iri maminetsi makumi matatu kuenda kuParis guta repakati.
Raphael Guerreiro Imhuri Yemhuri Imba yaive ingori 32-maminetsi ekutyaira kubva kuParis City Center. 📷: Google Mepu.
Raphael Guerreiro Mhuri Dzinobva:
Mune iro rakareruka, Mubhobho wenyaya nezve madzitateguru ake, hafu yechiPutukezi nehafu yechiFrench. Maizviziva here?… Raphaël Guerreiro akaberekerwa kunaamai veFrance nababa vechiPutukezi. Kuruboshwe-kuruboshwe, uyo kunyangwe aine hutano hwake hwekubva kuFrance, akagashira kare Mhuri dzePutukezi.
Raphael Guerreiro Upenyu hwepakutanga- Sei Nhabvu Yakatanga:
Kune mwana wese anoda kuve nyanzvi yebhola, chinhu chimwe chakasikwa. Hapana mumwe kunze kwekutora mufananidzo weIdol. Maizviziva here? ... Mudiki Raphael Guerreiro, pamazuva ekukura kwake, aive mukomana mukuru mukomana weaimbove mutambi wechiPutukezi, Pauleta.
Raphael Guerreiro paakanga achiri mudiki akatora kurudziro kubva kune wechiPutukezi, Pauleta. 📷: PortuguseseAJ uye Bernews
Pachine mifananidzo yaPauleta pamadziro pamba pevabereki vangu
Guerreiro akamboudza L'Equipe- French nyika zuva nezuva pepanhau. Akaenderera;
Ndakadzidza zvakawanda kubva kuhungwaru hwemurwi wechiPutukezi, Pauleta. Iye mumwe munhu airidza mutambo uyu mumusoro wake uye kwete netsoka chete.
Pauleta, iye wechipiri-nguva Ligue 1 mutambi wegore akange aine mukurumbira mukuru paari achiri mudiki. Kune Guerreiro wechidiki, iye prolific malengocorer anga asiri chete Ligue 1 Legend, asi mutambi uyo akaita kuti ade kwete chete Chiputukezi nhabvu asi Portugal kwakabva baba vake.
Kuda kwakakura kwenhabvu akaona Guerreiro mudiki, mugore ra1999, achinyoresa nechikwata chemuno chinonzi Blanc-Mesnil, icho chaive mamaira mashoma kure nemhuri yake. Mushure memakore mashanu ekutamba nhabvu yevechidiki yeanateur, wechidiki akazonzwa kuti nguva yaive yekutanga basa reudiki chairo.
Raphael Guerreiro Biography- Yekutanga Basa Rehupenyu:
Rangarira kuti EURO 2004 kumhanya?… Hongu, zvaive kukurudzira kwakanyanya kumudiki sezvo makwikwi aya akaona kuziviswa kwechifananidzo chake chapfuura, uyo ari mumwe weGreater Great Player yeMuPortugal- C Ronaldo. Mushure meEURO 2004, mwana mudiki akatanga kushuvira kuenda kumiedzo kuzvikoro zvepedyo zveFrance.
Kufara kwenhengo dzemhuri, kutsunga kwaRaphael Guerreiro kwakatanga kuripa sezvo mwana mudiki paakadaidzwa neFrench élite academy, INF Clairefontaine. Iyo academy, iyo inotariswa neFrench Soccer Federation yakanga isiri mukurovera vana.
Pakutanga, INF Clairefontaine yakamanikidza Guerreiro kudzidza kutamba nekukurumidza, iyo feat iyo yakamubatsira iye kusvika ikozvino. Kwete kukanganwa, kukura kwechidiki, matekiniki uye kugona kwemahara-kukona akaona mukomana wake wechidiki achimuita mukuru.
Raphael Guerreiro Hupenyu hweNyaya- Tarisa mazuva ake Ekutanga Ebasa. 📷: LeParisien.
Achitaura nezve kurongeka kwaaive akaita semutambi wechidiki, mumwe waaidzidza navo akamboti;
Aive mutambi anosarudza zvakanyanya pachikwata ichi, anotsigira Ivan Tankeo, waaimboshanda naye mumakore gumi nematatu. Sezvakangoita CR13, aipfura mateki ese akabudirira.
Vabereki vaRaphael Guerreiro Vabereki vakaita kumunyengerera:
Kare mumazuva, zvaingotora awa yekutyaira amai vake nababa vake kuti vamushanyire kune yechidiki academy- Clairefontaine, kwaakatamba nhabvu yake. Raphael Guerreiro anoomerera, kuti ndangariro dzake dzakanakisa dzagara iri nguva iyo vabereki vake vaizomunyengedza ne Chorizo ​​Sandwich, Chipo chakauya nguva imwe neimwe yaanogadzira chiitiko chakanakisa.
Kugashira sangweji yainzi 'Nyowani Chivi Chechidiki', sekureva kweshoko renhau dzeFrance. Mudiki paakadya, aigara achingofunga kupa shamwari dzake chidimbu chidiki. Muchokwadi, akaonekwa nevakawanda seane rupo, zvese pamusoro uye pakubuda kwegomba.
Raphael Guerreiro Biography- Nzira Inoenda Mukurumbira Nyaya:
Mushure mekuuya kuburikidza neFrance yakakurumbira Clairefontaine academy, nyeredzi inokwira, pazera ramakore gumi nemana inofunga kuenda kure, anenge 14 km kure nemhuri yake kumusha kunotamba naStade Malherbe Caen. Kuchikoro, mukomana akakura akapedza kudzidza kubva pahudiki kuenda kune mukuru nhabvu ine mavara anobhururuka.
Mushure mekubudirira kudzidza kubva kuCaen, Raphael Guerreiro, sevamwe vake vazhinji vakatanga kuridzira timu yeCaen's reservation timu. Ari ikoko, akasimuka pamusoro pevamwe vaaibata navo, ruzha rwakamutaridzira pakarepo kuchikwata chechikwata chikuru. Kunyangwe pachikwata chevakuru, dura rake rakaramba richikwira. Wechidiki uyu, aigara achifemerwa kubva kuna C Ronaldo akazviona achiwana mukurumbira wekukova makanaka-free kick.
Kutenda kwake kushinga, FC Lorient, pamwe nemurairidzi wePortugal U21 akacherekedza uye akauya kuzopamba Caen nhabvu nhabvu muzita rekuwana siginecha yake. KuFC Lorient, Raphael Guerreiro akava muponesi. Maizviziva here?… Basa rake mukuponesa FC Lorient kubva mukuzvikonzera zvakaita kuti zviroto zvake zviitike. Chishamiso, nyeredzi iri kusimuka yakawana foni yechiPutukezi kuti itambe muEURO 2016.
Raphael Guerreiro Biography- Simuka kune Mukurumbira Nyaya:
Kupesana nematambudziko ese, muPutukezi akazadzisa kurota kwake kwehucheche nekuva chikamu chakakomba cherutivi rwake rwenyika chakatyora mwoyo yeFrance paEURO 2016. Fans vakatenda Raphael Guerreiro nezita rekuremekedza - 'The Battery'- zvese nekuda kwehukuru hwake hwesimba pane gomba, panguva yemitambo.
Mushure kusimuka kune chiitiko muEURO 2016, mutambi wepamusoro akatanga kukwezva makirabhu mazhinji epamusoro peEuropan. Pakati pavo pakanga paine Thomas Tuchel's Borussia Dortmund uyo anonzi akabhadhara FC Lorient kumwe kunharaunda yedunhu € 12m nekuda kwemabasa ake.
Senguva yekunyora yaRaphael Guerreiro's Biography, Mutambi wenhabvu ane, pasina kupokana, akabata mukana mumwe neumwe wakapihwa kwaari kuhuviri hwekirabhu uye yenyika.
Akanaka Akasununguka-mateki, pakati pemamwe masimba ake, anga ari pfuti yakakosha mune raRaphael Guerreiro mudhongedzo rezvombo pasi makore. Ndosaka ari kunyorerwa seimwe ye Akanaka Kwazvo Kuruboshwe vezera rake. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Raphael Guerreiro Mudzimai Nevana:
Pane chirevo chekuti kuseri kwemurume wese akabudirira, kune mukadzi. Kwatiri, kumashure kwemutambi akabudirira saRaphaël Guerreiro, pakanga paine musikana waakazoita mukadzi wake anoyevedza. Haasi mumwe kunze kwemukadzi weBlond anoenda anonzi Marrion.
Sangana nemukadzi waRaphael Guerreiro, Marrion. Ndiye mukadzi ari shure kwekubudirira kwake kusvika zvino.
Kubva mumagariro enhau, zvinoratidzika semukadzi waRaphael Guerreiro, Marrion akatanga ari musikana asati ave mumukadzi wake pane imwe nguva kutenderera 2016. Zvakawanda hazvo, zvinokwanisika kuti vaviri vadiwa vaive nemuchato wepachivande nemhuri yepedyo nehama dzaivapo. Imba yavo yakakomborera chaizvo.
Sangana naRaphael Guerreiro Mukadzi uye neMwanakomana kunzvimbo yakanaka yemvura kwairi.
Vese vari vaviri vakave vabereki vemwanakomana wavo wekutanga, Sacha, akazvarwa kwakapfuura gore ra 2014. Zvakare, kutenderera zuva ra 18 Nyamavhuvhu 2016, Raphael Guerreiro nemukadzi wake vanogamuchira musikana musikana 'Ana' mumba mavo.
Sezvaungadaro iwe waona, wePortugal EURO anokunda anosarudza kuchengeta zvinhu zvine chekuita nemhuri yake zvakavanzika. Semuenzaniso, iye anogonesa zviso zvese zvevana vake, vabereki, vanun'una (kunze kwemukadzi wake) anochengeterwa kure neruzhinji. Muzvikamu zvinotevera, tichauya kuzokuudza rudzi rwababa vaari.
Isu takasimbisa chokwadi chekuti kubvira ra2020, mudzimai waRaphael Guerreiro akamuwanira vana vaviri.
Tichifunga nezve nyaya yemakore ake ekutanga ebasa, zvinoita sekuti vabereki vaRaphael Guerreiro vaigara vaine nzira yekuwana zvakanyanya maari. Kudzoka mumazuva, vakamupa chiokomuhomwe vachishandisa Chorizo ​​Sandwich yake yaaida. Iye zvino vateveri venhabvu vanodzokera kuti vatevedze izvo kumwanakomana wake, iwe nenzira yake.
Nhasi, mhuri yaRaphael Guerreiro inoda chimwe chizvarwa chevatambi venhabvu, uye izvi zvinogona chete kuuya kuburikidza nemwanakomana wake. Sababa vemazuva ano, nyeredzi yeBVB ikozvino ine chisungo. Zano rake rekutanga nderokuvaka chisungo chababa nemwanakomana. Nzira yakakwana yekuzadzisa iyo ndeye kushandisa nguva paDisney Land. Ndiani anoziva! Kuda kunoita mukomana mudiki kuna baba vake kungamuona achidzosera tsitsi nekubvuma nhabvu semagumo ake.
Ukama hwaBaba-Mwanakomana hwakakosha mune ramangwana.
Raphael Guerreiro Munhu Hupenyu:
Kusvika pakuziva izvo nyeredzi yebhola inoita kubva pagomba zvaizobatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake. Kutanga uye pamberi pezvese, Raphael Guerreiro mumwe munhu ane maari, nyika yemukati yekuzvimiririra kana mumashoko akareruka; Iye anopfuura womupanduki.
Kure nemitambo yebhola, iyo BVB nyeredzi ingangove inowanikwa mumba make pamusoro pezvaanofarira kuita. Unofunga kuti chii? ... Iyo tsika yekuona TV Series. Sezvinoonekwa pazasi, Raphael Guerreiro yakakura Netflix fan, iye anogona kutungamira kune vezvenhau-masevhisi zuva rese. Seuchapupu, heino muenzaniso iye akatarisa Netflix TV nhepfenyuro "Narcos."
Raphael Guerreiro Hupenyu hweMunhu- Iye Mufambi Webhola anofarira kuva nenguva yakanyarara achitarisa Netflix Series kana asiri kutamba nhabvu.
Zvikuru pahupenyu hwake hwega, kana iye Mukoka webhola asina kuvharwa neNetflix, angasarudza kushandisa nguva yake kutamba mitambo yemavhidhiyo padivi pemwanakomana wake. Ona pazasi, zvinoita sekuti zviri nyore kuti atange mwanakomana wake kuita zvemitambo yemitambo.
Iyo PlayStation Hupenyu hwemhuri ndehwechokwadi. Kubatanidza mwanakomana wake ane makore maviri zvichiratidza izvozvo.
Raphael Guerreiro Mararamiro:
Muchikamu chino, tichakuudza maitikiro akaitwa naRinobhola. Kutanga uye pamberi pezvese, vabereki vaRaphael Guerreiro vakamupa iko kudzidzisa kwakanaka kwekumba nezvekuchengetedza hutano hwakanaka pakati pekushandisa mari nekuchengetedza mari.
Kune chikamu chikuru, iye EURO 2016 anokunda haatendi mukuratidzira pachena mararamiro anoshamisa- mumwe anoonekwa nyore nevashoma emota dzinopenya, dzimba huru / dzimba etc. Mari yake yemanje yemitengo inosvika mamirioni masere nemakumi maviri emusika mutengo weimwe. pane mamirioni makumi maviri nemashanu maEuro achiri kumunetsa. Raphael Guerreiro akambotaura nezve hupfumi- mumashoko ake;
Pandakasiya kirabhu yangu yekare Caen kuenda kuLorient, i coud don’t believe kuti ndakakodzera € 3m. Iyi yaive mari yakawanda kwandiri, kunyanya ndichiziva kuti ndaibuda mukuneta 2. ” Vabereki vangu vakatonyanya kushamisika kupfuura ini.
Sevimbiso kwandiri, ndakaedza kurarama nemubhadharo wangu uye kuratidza kukosha kwangu. Ipapo, pane imwe nguva ndakazviudza: 'Chii chinonzi gehena chiri kuitika?' kuva nehukuru hukuru hunokosha kunogona kuita kuti iwe uzvivimbisewo.
Raphael Guerreiro Hupenyu hwemhuri:
Mune ruzivo rwedu rwekunyora footballers biography nyaya, isu taona kuti vatambi vane mhuri dzakabatana vanozivikanwa kuti vane pfungwa yakasimba yekuva. Muchikamu chino, tinokupa chokwadi chakawanda kuvabereki vaRaphael Guerreiro pamwe nehukama hwake nenhengo dzemhuri.
Pamusoro paBaba vaRaphael Guerreiro:
Kutanga uye kunyanya, baba vake vaimbove mutambi wenhabvu naBlanc-Mesnil, iyo kirabhu umo mwanakomana wake akatanga rake rehudiki basa. Kwete nekutenda kwakundikana basa rebhora, baba vaRaphael Guerreiro vakabva vaenderera kunoshanda mufekitori padyo neParis.
Maizviziva here? ... baba vaidada vakamboda kuti mwanakomana wavo atambe semutambi asi akasangana nevarairidzi veBlanc-Mesnil vakasimbirira Guerreiro kuti arambe ari kuruboshwe-midfield kana kuruboshwe-kumashure chinzvimbo. Pakuramba, maneja wekirabhu akatya kuti baba vaizoburitsa mwanakomana wavo kunze kwekirabhu. Mabhonzo avo, izvo hazvina kuitika.
Nezve Amai vaRaphael Guerreiro:
Kutanga uye pamberi pezvese, iyo super mum ndeye munhu wepfungwa ari kumashure kweiyo pfungwa yakanaka yekutenga Chorizo ​​Sandwiches senzira yekunyengerera mwanakomana wake nguva imwe neimwe yaanoita zvakanaka pagomba.
Asides izvi, amai vaRaphael Guerreiro mumunda zvakare unodzivirira. Akambosimbirira Blanc-Mesnil (wechidiki wechidiki mudzidzo) kuti achengetedze mwanakomana wake nekuti aive mupfupi masendimita gumi pane vamwe vezera rake nechikwata. Chinangwa ndechekuti Raphael mupfupi asakwikwidze mumuviri nevatambi vake kunyanya mushure mekudzidziswa.
About Raphael Guerreiro's Hama:
Maputukezi anobva kumhuri yevana vechirume. Mumhuri make, mukadzi oga anoitika ave amai vake. Pakati pehama mbiri dzaRaphael Guerreiro, anoratidzika kunge mukuru, Emanuel anozivikanwa kwazvo kupfuura imwe hama. Unogona here kufungidzira mukoma mukuru Emanuel kubva pamufananidzo uri pazasi?
Sangana naRaphael Guerreiro Mukoma, Emanuel Guerreiro. Iye akamisikidzwa rwechipiri kubva kuruboshwe basa.
Raphael Guerreiro Untold Chokwadi:
Muchikamu chino chekugumisa cheNyaya Yedu Yeechidiki uye Biology kunyora, tichakuratidza chokwadi chausina kumboziva nezve 'Bhatiri.'
Chokwadi #1- Mari Yemubhadharo:
Musi wa 16 Chikumi June 2016, Raphael Guerreiro akasaina chibvumirano neBorussia Dortmund, chimwe chakamuona achitora muhoro wehipping we 1,979,040 Euro pagore. Mushure mekupwanya muhoro wake muzvikamu zvidiki, tine zvinotevera.
TENURE / KUSVIRA
Kwegore € 1,979,040 £ 1,764,146 $1,907,386
Pamwedzi € 164,920 £ 147,012 $158,949
Pa Vhiki € 38,000 £ 33,874 $36,624
Pazuva € 5,428.6 £ 4,839 $5,232
Pa Awa € 226 £ 202 $218
Per Second € 0.06 £ 0.056 $0.60
Izvi ndizvo zvakaitwa naRaphaël Guerreiro akawana kubva pawakatanga kuona peji ino.
Chokwadi #2- Kuenzanisa kweMhoro kune Avhareji Man:
Wanga uchiziva here?… Wepakati mugari wemuFrance anowana kutenderedza € 2,999 pamwedzi angangoda kushanda kwegore rose nemwedzi mitanhatu kuti aite izvo Raphael Guerreiro anogashira mwedzi.
Zvakawanda kudaro, avhareji mugari weGerman anowana 3,770 ma euro pamwedzi angangoda kushanda kweanenge makore matatu nemwedzi minomwe kuti awane mari yaRaphael Guerreiro.
Pakupedzisira, avhareji yechiPutukezi anowana 1188 ma euro pamwedzi aigona kuzoshanda kushandira makore gumi nerimwe uye nemwedzi mitanhatu kuti awane mari yake yemwedzi.
Chokwadi #3- Akambotora Chinangwa Chisingadaviriki:
Maizviziva here?… Vhidhiyo yemaficha aRaphael Guerreiro achitora tsvina inodzora svutugadzike shure pakudzidziswa kamwechete kwakaenda kuhutachiona. Vhidhiyo (pazasi) chiratidzo cheunyanzvi hwake hunoshamisa hwekuchinja-chinja uye chiri chokwadi, isimba rake guru.
Chokwadi #4- Zvinotaurwa neFIFA yake Stats:
Sezvenguva yekunyora yaRaphael Guerreiro's Biography, iye Footballer (makore 26) ane akawanda akanaka hunhu kuzita rake. Iwe, kwete makumi matatu, asi uine chikamu makumi masere nemasere pamazera makumi maviri nematatu emakore, zvichine makore mazhinji ekukura. Chekupedzisira, tinoona Raphael Guerreiro ari under-yakapihwa yeiye FIFA mukana wekukora.
FIFA Potential anoratidza kuti ndiye mumwe akanakisa pakutengesa kwake
Chokwadi # 5- Ane iyo Chiputukezi Order yeMerit Honor:
Yedu chaiyo Raphael Guerreiro haingori mukundi wemazita. Wakanga uchiziva here?… Akatogamuchira 'Mutemo wechiPutukezi weMerit. ' Uyu mubairo unowanzoenda kune avo vakaita kuti nyika idade kuburikidza nekwavo kwakakodzera kuita kana sevhisi. Raphael Guerreiro padivi nechikwata chake vakagamuchira mubairo uyu mushure mekunge vabatsira Portugal kukunda EURO 2016.
Tarisa Wekuruboshwe Winger uye Gang rake. Ivo vese vakatambira iyo Portuguese Order yeMerit nekutenda kuEuro 2016
Isu takagadzirira tafura iyo inoratidza imwe yeruzivo ruzivo nezve Raphael Guerreiro Biography Chokwadi. Icho chinangwa ndechokukupa iwe kugona kupfura kuburikidza nePortugal vatambi '.
Zita rizere: Raphaël Adelino José Guerreiro
Akazvarwa: Zvita 22 Zvita 1993 kuLe Blanc-Mesnil, France.
Vabereki: Amai (French Ancestry) uye Baba (Ancestry yechiPutukezi)
Vanun'una: Emanuel Guerreiro
Hobbies: Kuona TV Series uye kutamba PS4.
Kuridza Position: Kuruboshwe kumashure / Midfielder
Net Worth: 8 Mamirioni maEuro
Ndinokutendai nekuverenga iyi yekunyora yekutanga paRaphael Guerreiro Yenyaya Yemwana Nyaya uye Biography. Sezvamungave iwe waona, pane zvakawanda nezveMudhudhudhu pane iwe zvimwe zvaungave uchiziva nezvake.
Vaverengi vanoremekedzwa, ndapota tipeiwo maonero (s) ako nezvechinyorwa ichi uye zvakare, Mufambi wechikamu muchikamu chekupindura. Semuenzaniso, iye Kuruboshwe-Mutambi wenhabvu ane zvakawanda zvekupa mune rake basa?